कंगनाले हालसम्म पनि विवाह नगर्नुको कारण यस्तो
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतले पनि आफ्नो बिहेको बारेमा चर्चा गरिरहेकी छिन् । हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनले बिहे नगर्नुको कारण बताइन् । कंगनाले भनेकी छन्, मानिसहरूले मेरोबारेमा विभिन्न अफवाह फैलाइरहेका छन् । मलाई झगडालु व्यक्तिका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
कंगनाले ठट्टा गर्दै भनिन्, ‘यस्ता अफवाहले मानिसहरूलाई मेरो बारेमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ र अब सही म्याच खोज्ने बेला आएको छ ।'
उनी पछिल्लो समय फिल्म ‘धाकड’ को प्रचारमा रहेकी छन् । उक्त फिल्मको प्रमुख भुमिकामा कंगना, अर्जुन रामपाल रहेका छन् ।
सिद्धार्थ कननसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको थियो कि के उनी वास्तविक जीवनमा पनि बलियो छिन् ?
यसको जवाफमा कंगनाले भनिन्,'त्यस्तो होइन । वास्तविक जीवनमा मैले कसलाई हराउने ? तपाईहरुजस्ता मानिसहरूले मेरो बारेमा अफवाह फैलाएकाले मैले बिहे गर्न पाएकी छैन ।'
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत